यस्तो रह्यो यो साताको शेयर बजार, के होला अब?
काठमाडौं, साउन २५ : यो साता नेप्से परिसूचक १२६३ दशमलव ८४ विन्दुमा खुलेको थियो भने १२६६ दशमलव ३७ को ‘इन्ट्राडे’ उच्च विन्दु बनाएको थियो।
त्यसैगरी, ‘इन्ट्राडे’ न्यून विन्दु १२३७ दशमलव ३१ थियो भने बजार १२३८ दशमलव ५६ विन्दुमा बन्द भएको थियो। यो अघिल्लो साताभन्दा २५ दशमलव २८ अंक अर्थात २ प्रतिशतको गिरावट हो।
यो साता पाँच कारोबार दिनमा २ अर्ब १९ करोड १३ लाख बराबर रकमको शेयर कारोबार भएको छ। यो अघिल्लो साताभन्दा ५ दशमलव ०४ प्रतिशतले वृद्धि हो।
बजारको उतारचढाव कस्तो रह्यो भनेर हेर्नलाई चित्र नं. १ मा नेप्सेको साप्ताहिक मैनबत्तीलाई प्रयोग गरिएको छ। यो साता बजारको प्रवृत्ति टेवा क्षेत्रमा रहेको र यो साताको मैनबत्तीले वियरिस मारुबोजु आकृति बनाएको छ। यो आकृतिले बजार अझ केही सच्चिन सक्ने संकेत गर्नुका साथै परिमाणले पनि समर्थन गरेको देखिन्छ।
चित्र नं.२, गत तीन महिनादेखि बजार कस्तो रह्यो भनेर हेर्नलाई दैनिक मैनबत्तीहरुलाई प्रयोग गरिएको छ। पाँच कारोबार दिन अर्थात यो साता बजार घट्दो प्रवृत्तिमा रहेको छ र हाल बजार टेवा क्षेत्रमा रहेको देखिन्छ। अन्तिम दिनको मैनबत्तीले वियरिस मारुबोजु आकृति बनाएको छ। यो आकृतिले बजार अझ केही सच्चिन सक्ने संकेत गर्दछ।
यो साता ६ र २१ दिनको एक्सपोनेन्सियल मुभिङ्ग एभरेज (ईएमए)हरुले डेड क्रस बनाएको छ, यसले बजारमा विक्रेताको चाप हुन सक्ने संकेत गर्दछ। रिलेटिभ स्ट्रेन्थ इन्डेक्स (आरएसआई) ३६ दशमलव ९९ अंकमा रहेको छ। यसको प्रवृत्तिले बजारमा विक्रेताको चाप रहेको संकेत गरेको छ। एमएसीडीले पनि बजारमा पुन विक्रेताको चाप रहेको र हालसम्म नकारात्मक क्षेत्रमा रहेको देखिन्छ।
निष्कर्ष : हालसम्म नेप्सेका प्रवृत्ति र सूचकका आधारमा बजार टेवा क्षेत्रमा रहे पनि बजार सकारात्मक भइहाल्ने संकेत भने देखिँदैन। त्यसैले हाल पर्ख र हेरको रणनीति अपनाउन उपयुक्त देखिन्छ। बजारको मुख्य टेवा क्षेत्र भने १२०० देखि १२४० को क्षेत्रमा रहेको देखिन्छ। यो क्षेत्रमा खरिदकर्ताहरुको प्रवेश हुन सक्ने सम्भावना प्रवल रहन्छ। यदि बजार १२०० भन्दा तल स्थिर रहेमा बजार अझ केही सच्चिन सक्ने सम्भावना रहन्छ।
Published Date: Saturday, 10th August 15:24:50 PM